ALATSINAINY 23 AVRILY 2018
KAOMISERA RAFALIARIVO JULES : « Mampitandrina ny mpisera ao amin’ny pejy facebook « Dossiers secrets mafana maloto » »
Efa ho volana maromaro izay dia nahazo vahana ilay pejy Facebook mitondra ny anarana « Dossiers secrets mafana maloto ». 18 mai 2017
Efa tafakatra 44 000 mahery ny mpikambana ao aminy. Fandrangitana adim-poko sy fanalam-baraka olona no mibahan-toerana ao anatiny.
« Samy lasibatra ao amin’ity pejy amin’ny tambajotra soasialy ity avokoa ny mpanakanto, mpanao politika, mpitandro filaminana. Anisany iharan’ny fanaratsiana tsy mitombina ao anatin’io pejy io koa ny tenako sy ny polisin’ny Fip Toamasina », hoy ny Kaomandàn’ny Fip Toamasina, Rafaliarivo Jules. « Maro koa ireo fitarainana tonga eto aminay momba io pejy facebook io ka tsy maintsy horaisinay ny andraikitra », hoy hatrany ny kaomisera mitondra fanazavana.
Ekena fa firenena mandala ny demokrasia i Madagasikara ary manaja ny fahalalana maneho hevitra saingy tsy azo ekana kosa ny fandrangitana adim-poko sy famafazana lainga tahaka ny ataon’io takelaka « Dossiers secrets mafana maloto » io. Dosie tsy mitombina, feno lainga sy fitaka be vava mampisavorovoro saim-bahoaka no aely ao, hoy hatrany ny lehiben’ny Fip Toamasina mampiseho ny tsy fankasitrahany an’io pejy io.
Mampitandrina ny olona namorona io pejy io sy izay mpitantana azy (administrateur) ary ireo rehetra mpikambana ao ny Kaomisera Rafaliarivo Jules mba hampitsahatra famafazana lainga. Efa mandeha ny fanadihadiana sy fikarohana mikasika io pejy, hoy ny lehiben’ny Fip Toamasina.
« Akatony ny pejy rehefa tsy voafehy intsony ireo kaonty fako ( compte fake) », hoy izy namarana ny teniny.
Notsindromin’ilay tovolahy antsy ny sipany HASAROTAM-PIARO TAFAHOATRA (474) 19 avril 2018 Maty tanteraka ny demokrasia, manjaka ny ramatahora FANDAVANA NY HETSIK’IREO SOLOMBAVAMBAHOAKA (349) 19 avril 2018 Tsy hihemotra ireo depiote, andrasana izay hiseho NA MISY AZA NY RAMATAHORA… (326) 21 avril 2018 Hanakarama « be sandry » hisakana ny hetsika ny Hvm TATITRA MOMBAN’NY LALAM-PIFIDIANANA ETO ANTANANARIVO (308) 17 avril 2018 Manaraka fitsaboana eto an-drenivohitra FITIFIRANA NY FILOHA LEFITRY NY FITSARANA AO FIANARANTSOA (264) 17 avril 2018 Mikoropaka, miantso fifanatonana PRAIMINISITRA MAHAFALY SOLONANDRASANA (261) 23 avril 2018